धुर्मुस सुन्तलीको एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण ~ FMS News Info
धुर्मुस सुन्तलीको एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण
काठमाडौं: हास्यकलाकार जोडी सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले काभ्रेपलाञ्चोकको पहरी बस्तीमा बनाएको एकीकृत नमुना बस्ती स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्का बुधबार नमुना बस्तीमा बनेका २० घरको चाबी परिवारका मुलीलाई हस्तान्तरण गरे।भूकम्पले पहरी समुदायका अधिकांशको घर भत्किएको थियो। घर हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री डा. खड्काले सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको लागि योजना बनाइरहँदा कलाकारले निर्माण गरेको एकीकृत बस्तीको कामले फाइदा पुगेको बताए।
कलाकार हरिवंश आचार्यले कलाकारमा मानवीय संवेदनाको रूप हुने उदाहरण धुर्मुस र सुन्तलीले प्रस्तुत गरेको बताए। कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले धुर्मुस सुन्तलीले सामाजिक कार्यको आनन्द लिइरहेको बताए।
कार्यक्रममा धुर्मुसले भूकम्पपछि अमेरिकाको कार्यक्रमलाई रद्द गरेर नेपाल फर्किएपछिको अवस्थाको स्मरण गर्दै विभिन्न ठाउँको खोजी पछि पहरी बस्तीमा आइपुगेको बताए। उनले भने, 'लगातार झन्डै ७५ दिन बारीको पाटामा सुत्दै घर बनाएर अहिले समुदायलाई जिम्मा दिँदाको खुसीको म वर्णन गर्न सक्दिनँ।'
यो जोडीसँगै मेरी बास्सै, भद्रगोल र सगुन डटकमको सहकार्यमा बस्तीका घरहरू निर्माण गरिएका हुन्। कार्यक्रममा बस्ती निर्माणमा जन श्रमदानदेखि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो।
बस्तीमा बनेका प्रत्येक घरमा तीनवटा कोठा र एक ट्वाइलेट बाथरुम छ भने सबै घरमा डिस जोडिएको छ। प्रत्येक घरको अगाडि एक-एकवटा धारा जडान गरिएका छन् भने ट्वाइलेटको मलमूत्रलाई सीधै बायोग्यासमा जोडेर ग्यास उत्पादन गरिएको छ। त्यहाँ घुम्न आउने पाहुनाका लागि पाहुना घरको समेत निर्माण गरिएको छ।